Zimbabwe PM Morgan Tsvangirai says he has found true love
Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai is seen with his new wife Elizabeth Macheka during a traditional wedding ceremony. Source: AP
ZIMBABWE'S prime minister has said at his marriage ceremony he had to date several women to find the one he truly loves.
Prime Minister Morgan Tsvangirai dismissed as propaganda reports by state media that say he leads an irresponsible private life which makes him unfit to lead the country.A Zimbabwe magistrate ruled on Friday that Mr Tsvangirai could not go ahead with a formal wedding after a jilted ex-lover filed a suit against him claiming the two were still married under Zimbabwe's tribal laws. The court upheld that Mr Tsvangirai paid a traditional bride price for the woman last year and therefore was married to her.The magistrate cautioned Mr Tsvangirai that if he signed a legal marriage register with his new wife, he could be prosecuted for bigamy.Mr Tsvangirai, 60, and Elizabeth Macheka, 35, exchanged vows on Saturday but did not sign the legal marriage register.
Speaking in the local Shona language at the lavish event that continued until the early hours of Sunday, Mr Tsvangirai reassured his supporters and Zimbabweans in general that he had not made errors of judgment in seeing other women since his wife of 31 years, Susan, 50, died in a car accident in 2009.Several top regional leaders had been invited to the wedding but did not show up, presumably because of the court order that the wedding not go ahead.Zimbabwe's state media loyal to President Robert Mugabe, who is in a shaky, three-year coalition with Mr Tsvangirai, yesterday described the ceremonies as a "circus" and Mr Tsvangirai as promiscuous and "sex-crazed".The state-controlled Sunday Mail said Mr Tsvangirai was a "good-for nothing politician whose mission in politics is to seek power to get sex".The state Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) on Friday broadcast video footage of what it said was Mr Tsvangirai's traditional marriage to the other woman, Locardia Karimatsenga, 39."ZBC, shame on you for your unprofessionalism. You are dividing Zimbabwe and sowing hate," Mr Tsvangirai told his wedding guests.Mr Tsvangirai said he was being "condemned, harassed and vilified" for falling in love with the woman of his choosing."I love this woman because I chose her myself. I will love her till the day I die," he told his supporters during the ceremony.Mr Tsvangirai said "love has nothing to do with politics", apparently referring to the fact that his new bride's family belongs to Mr Mugabe's Zanu-PF party."I saw a beautiful woman," he said. "I said she is beautiful for someone like me who has an eye for beautiful women."